राजेन्द्र महतो उपप्रधानमन्त्री, अरु को-को बने मन्त्री ? (सूचीसहित) - Lekhapadhi मुख्य समाचार : Lekhapadhi lekhapadhi: global magazine of news and opinion
लेखक : लेखापढी २२ जेष्ठ २०७८, शनिबार ०४:१४ मा प्रकाशित
काठमाडौँ – जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुर पक्ष सरकारमा जाने भएको छ । साँझ ६ बजे सपथ राखिएको छ । जसपा स्रोतका अनुसार वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा सरकारमा जान लागिएको हो । महतो उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्री हुनेछन् ।
को को बने मन्त्री ?
१, राजेन्द्र महतो– उपप्रधान मन्त्री तथा शहरी विकास
२, शरत सिहं भण्डारी – उर्जा
३.अनिल झा– खानेपानी
४, बिमल श्रीवास्तव– श्रम
५, उमाशंकर अरगरिया– वन तथा वातावरण
६, लक्ष्मण लाल कर्ण– भुमिसुधार
७, चन्दा चौधरी – महिला
८, एकवाल मियाँ– युवा
९, चन्द्रकान्त चौधरी – राज्य मन्त्री उर्जा
१०, रेणुका गुरुङ – राज्य मन्त्री महिला